Ọrụ Blogging na IE7 Development | Martech Zone
Wenezde, August 23, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Na nso nso a, edere m ihe na-agbasasị post gbasara Microsoft na-abịanụ push nke Internet Explorer 7.
The Internet Explorer blog nwere a post ụnyaahụ nke nwere ike ịnye ụfọdụ ozi ọma:
IE 7 bụ ihe mgbago na mbọ anyị na-eme iji bulie ụkpụrụ anyị (ọkachasị na CSS).
Microsoft kwuru na nzaghachi sitere n'ọtụtụ isi, gụnyere IEBlog, nyeere ha aka “ibute ihe dị iche iche ụzọ” ma chọpụta ihe ndị kacha njọ ”. Daalụ maka ige ntị, Microsoft! Had nyere m nchegbu. Ugbu a, m na-echegbu onwe m. Ana m atụ anya inweta IE 7 ma nwee ahụ efe.
Ọ bụ ihe ọmụma na ịde blọgụ nwere ike ime mgbanwe dị ka nke a na ụlọ ọrụ.
Ọ bụghị Mgbalị Na-eju Ndị Mmadụ Anya